Gudniinka wiilasha oo waxtar weyn u leh ka hortaga cudurka HIV/AIDS. – SBC
Gudniinka wiilasha oo waxtar weyn u leh ka hortaga cudurka HIV/AIDS.
Posted by editor on Agoosto 16, 2011 Comments
Qubarada reer Galbeedka ayaa haatan soo saarey daraasado cusub oo ku qotoma arimo ay horey u soo dajisay shareecada Islaamka, kuwaasi oo saynisyahanadu dib ka ogaanayaan.
Hadaba daraasad cusub oo dhawaan soo baxdey ayaa lagu ogaaday in gudniinka ragga uu kaalin weyn ka qaato ka hortaga cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS oo haatan dunida si weyn ugu fara kulul isla markaana maalin kasta boqolaal qof ay u geeriyoodaan, kumanaan caruur ahna ka dhiga awlaad la’aan.
Michel Sidibe oo ah agaasimaha fulintya ee hay’adda UN AIDS ee qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka cudurka HIV/AIDS ayaa ka shanqariyey in baaritaan laga sameeyey wadanka Koonfur Afrika oo ku aadan ragga aan la gudin iyo kuwa aan gudneyn ee uu ku dhaco cudurka AIDS-ka ay kordheen kuwa aan gudbeyn ee beejadu ka laadlaado, waxaana uu sheegay 55% arinkaasi uu kor kacay, waxaase uu sheegay in markii la qaaday olale wacyi galin ah oo la xiriira gudniinka wiilasha uu hoos u dhac ku yimid 76%.
The Michel Sidibe wuxuu sheegay wadamo badan oo ku yaal qaarada Afrika sadexdii sano ee la soo dhaafay ay sii kordheen wacyigalinta la xiriirta gudniinka ragga taasi oo uu sheegay in laga dareemay faa’idada ay leedahay gudniinkaasi.
Daraasadan ay soo saartey qaramada midoobay laanta u qaabilsan la dagaalanka cudurka HIV/AIDS waxay sheegtey in wadanka Koonfur Afrika laga hirgaliyey olole bilaash ah oo gudbiin lagu sameeynayey ragga 15 sano ka weyn waxaana lagu sameeyey gudniin 20 kun oo rag ah sadexdii sano ee la soo dhaagay, iyadoo la doonayo in la gaarsiiyo 110 kun.
UNAIDS waxay kaloo sheegtey in wadanka Kenya 290 kun oo rag ah sadexdii sano ee la soo dhaafay ay ka faa’ideysteen olalaha gudniinka lacag la’aanta ah, iyadoo si gaar ah ololahaasi looga fuliyey gobolka Nyanza ee dalka Kenya.
Dalka Tanzania oo dawlada wadankaasi ay ku dhawaaqdey olole lagu gudayo 2.8 (Laba milyan & sideed boqol oo kun) oo rag da’doodu u dhaxeyso 10 ilaa 34 sano jir waxaa la sheegay in sanadkan 2011 oo kaliya lix todobaad todobaad ayaa 10 kun oo wiilal & rag waa weyn waxaa lagu sameeyey gudniin.
Wadanka Swaziland, oo ah wadanka ugu sareeya tirada dadka qaba cudurka HIV-ga oo ah 26% dadka da’doodu u dhaxayso 15 ilaa 49 sano waxaa dhawaan lagu dhawaaqay qorshe si mudatawicnimo ah lagu gudayo 152,800 (Boqol konton & laba kun sideed boqol) oo rag ah.
UN AIDS waxay si diiran u soo dhaweysay daraasadan cusub & waliba talaabooyinka arinkan la xiriira ee haatan ka soconaya dunida meelo badan oo ka mid ah.